Property Law - all about real estate law in Myanmar
YUZANAR LAND REAL ESTATE
ဦးကျော်ဇေယျ ( ဥပဒေပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ )
အိမ်ရှင်၊ အိမ်ငှား ဆိုင်ရာ
လင်၊ မယား ဆိုင်ရာ
ပိုင်ဆိုင်မှု့နှင့် စာချုပ်စာတမ်း ဆိုင်ရာ
Website Usage Guide
We’ll be grateful if you would suggestion for us. It’s the online real estate website, consuming thousands of investors are posting and buying every day their perfect property.With your one suggestion can be make batter for our online real estate life. Also, we can provide an even better service in the future. Thank you for your time and we hope to see you one day any corner of the world.
ပြင်ဦးလွင်တို့ ကလောတို့ဘက်မှာ လယ်ယာမြေတွေကို အကွက်ရိုက်ရောင်းနေကြတာ ကြာပါပြီ။
04-May-22 အရောင်းအဝယ် ဆိုင်ရာ
ပြင်ဦးလွင်တို့ ကလောတို့ဘက်မှာ လယ်ယာမြေတွေကို အကွက်ရိုက်ရောင်းနေကြတာ ကြာပါပြီ။ ဘယ်သူတွေဝယ်လဲဆို ရန်ကုန်ကလူတွေဝယ်ကြတာများတယ်။ဘာလို့ဝယ်ကြလဲလို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ပထမအချက်ရန်ကုန်မှာ လူအများစုက တိုက်ခန်းနဲ့နေကြရတာ။စိတ်ကအမြဲမွန်းကြပ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ သူ...
မိမိ၏ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းလိုပါတယ် ။ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ ။
04-May-22 လင်၊ မယား ဆိုင်ရာ
မိမိ၏ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းလိုပါတယ် ။ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် လင်နှင့်မယား နှစ်ဦးသဘောတူလျှင် အချိန်မရွေးကွာရှင်းခွင့် ရှိပါ သည်။ မည်သို့ကွာရှင်းသင့်ကြောင်းကို ပိုစ့်တွေတင်၍ ရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။မိမိ၏ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းလိုလျှင...
ကိုယ်က မှန်လျက် ရှုံးသွားတတ်ခြင်း
04-May-22 ပိုင်ဆိုင်မှု့နှင့် စာချုပ်စာတမ်း ဆိုင်ရာ
ကိုယ်က မှန်လျက် ရှုံးသွားတတ်ခြင်းတရားရုံးကို ရောက်လာတဲ့အမှု(၂)မျိုး ရှိပါတယ်။ တရားမမှုနဲ့ ရာဇဝတ်မှု(ပြစ်မှု)တို့ ဖြစ်တယ်။တရားမမှုမှာ တရားမကြီးမှုဆိုတာရယ်၊ တရားမသေးမှု (တရားမအထွေထွေမှု)ဆိုတာရယ်(၂)မျိုးရှိပြန်တယ်။ ရာဇဝတ်မှုမှာ လည်း အလားတူပါပဲ။ ရာဇဝတ်ကြ...
တစ်လောက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မေမြို့ထင်းကြိုးဝိုင်းအတွင်း
02-May-22 အရောင်းအဝယ် ဆိုင်ရာ
တစ်လောက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မေမြို့ထင်းကြိုးဝိုင်းအတွင်း ခွင့်ပြုချက်တစ်စုံ တစ်ရာမရှိဘဲ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်၍ ကျောက်တိုင်စိုက်/သွပ်ဆူးကြိုးကာရံခြင်း၊ အုတ်တံတိုင်းခတ်ကာရံ၍ အဆောက်အဦ အခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားခြင်းများ တွေ့ရှိရပြီး ကျူးကျေ...
ငွေချေးလိုပါသည် ခိုင်မာအောင် ဘယ်လို စာချုပ်ချုပ်သင့်ပါသလဲ။
02-May-22 ငွေချေးခြင်း ဆိုင်ရာ
ငွေချေးလိုပါသည် ခိုင်မာအောင် ဘယ်လို စာချုပ်ချုပ်သင့်ပါသလဲ။ငွေချေးလိုခြင်းသည် အကြောင်းအရာ (၃)ရပ်အပေါ် အခြေခံမှုတည်ပါသည်။၎င်းအကြောင်းအရာများမှာ(၁) အတိုးလိုချင်၍ ချေးခြင်း(၂) အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဆွေ ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေသဖြင့် ကူညီပေးခြင်း (၃) အတ...
ကျေးရွာမြေ တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာအောင် ဘယ်လို လုပ်ထားရမလဲဆိုတာ သိပါရစေတဲ့…။
30-Apr-22 ပိုင်ဆိုင်မှု့နှင့် စာချုပ်စာတမ်း ဆိုင်ရာ
ကျေးရွာမြေ တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာအောင် ဘယ်လို လုပ်ထားရမလဲဆိုတာ သိပါရစေတဲ့…။ကျေးရွာအတွင်းမှ အိမ်ကွက်များကို တစ်ကွက်ချင်း နယ်နိမိတ်ခွဲခြား၍ တိုင်းတာ ပုံထုတ်ထားခြင်း၊ မှတ်တမ်းထားခြင်း မြေစာရင်းဌာနမှာ မရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာက မြို့မြေလို ကွက်စိတ် ကွက...
ကျွန်တော် ဝယ်ချင်သောအိမ်၏ မူလဂရန်ပိုင်ရှင်သည် သေသွားပါပြီ၊
28-Apr-22 အရောင်းအဝယ် ဆိုင်ရာ, ပိုင်ဆိုင်မှု့နှင့် စာချုပ်စာတမ်း ဆိုင်ရာ
ကျန်ရစ်သူ သားသမီးများဆီမှ ဝယ်လိုလျှင်ဂရန်အမည်ဖောက်၍ ရနိုင်ပါလားခင်ဗျာ။ကွယ်လွန်သွားသည့်ပိုင်ရှင်၏ အိမ် နှင့် မြေ သို့မဟုတ် မြေကွက်ကို အမွေဆိုင်များက ရောင်းချခြင်း၊ငှားရမ်းခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်း၁။ အမွေဆိုင် သားသမီးများ သ...
ဆရာ တိုက်ခန်းဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာ မြေရှင် လက်မှတ်ထိုးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေ မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။
27-Apr-22 အရောင်းအဝယ် ဆိုင်ရာ, အိမ်ရှင်၊ အိမ်ငှား ဆိုင်ရာ
ဆရာ တိုက်ခန်းဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာမြေရှင် လက်မှတ်ထိုးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေ မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။တကယ်လို့မြေရှင်လက်မှတ်မထိုးပဲဝယ်ယူရင် မိမိအတွက် ဘာတွေဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါသလဲ သိပါရစေ။(စျေးကွက်သတင်းစာကဆောင်းပါးတစ်ခုနဲ့ဖြေပေးလိုက်ပါမယ်)တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို ဝယ်ယူ မှ...
ယနေ့ခေတ်မှာ အများစုက ကွာရှင်းပြတ်စဲ စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် အသင့်ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ပုံစံတွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုကြလေ့ရှိပါတယ်
26-Apr-22 လင်၊ မယား ဆိုင်ရာ
ယနေ့ခေတ်မှာ အများစုက ကွာရှင်းပြတ်စဲစာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် အသင့်ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့စာချုပ်ပုံစံတွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုကြလေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကွာရှင်းပြတ်စဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ သားသမီးအရေးကိစ္စ၊ ပစ္စည်းခန်းကိစ္စတွေပါလာရင် ကွာရှ...
အမြန်လမ်းအသုံးပြုသူ ကားမောင်းသူမှမဟုတ်ပါဘူး ယဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသွားပြည်သူတိုင်း သိမ်းထားကြပါ
အမြန်လမ်းအသုံးပြုသူ ကားမောင်းသူမှမဟုတ်ပါဘူး ယဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသွားပြည်သူတိုင်း သိမ်းထားကြပါ#ဘာပဲလိုလိုဒီPostကိုသတိရလိုက်ပါ။..#အမြန်လမ်းမှာ ......လုယက်မှု့ဖြစ်ဖြစ်အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလိုလို ဒီ Post ကို သတိရလိုက်ပါ။Save ထားရင် ပို အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် ။အမြန...
Showing 1 to 10 of 490 results
Want our weekly latest properties email?
ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?
www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
09 880 031 082
09 880 032 466
အမှတ် 9/27 ဓမ္မစင်္ကြာလမ်း၊ ကလောမြို့၊ မြန်မာ။
Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate